Vaovao momba ny orinasa Machining Machining China Dongguan | The PTJ Hardware Inc.
4 karazana fampiharana lehibe an'ny milina cnc avo lenta
Amin'ny alàlan'ny famotopotorana lalina sy ny fifandraisana eo amin'ny mpampiasa indostrialy dia manana fahatakarana mazava kokoa izahay momba ny fivoaran'ireny indostrian'ny mpampiasa ireny, ny toetoetran'ireo faritra mahazatra, ary ny fepetra takiana amin'ny fitaovana.
Miaraka amin'ny Pandemie COVID-19, ny baiko momba ny milina Cnc dia nianjera tamin'ny teboka ambany indrindra tao anatin'ny 11 taona
Tamin'ny volana aprily 2020, ny asan'ny indostrian'ny milina amerikana dia nilatsaka tamin'ny ambaratonga ambany indrindra tao anatin'ny 11 taona, indrindra noho ny fahasimbana lehibe teo amin'ny rojo famatsiana vokarin'ny valanaretina virus coronavirus.
Machining CNC sy fandrafetana ny fizotran'ny Hub misy kodiarana fiara
Ny fanamboarana kodiarana fiara dia fiovana avy amin'ny mafy ka hatramin'ny mafy. Ny endrik'ilay foibe dia namboarina tamin'ny alàlan'ny fanoratana, fanindriana, fanaovana hosoka, sns. Androany, novokarina ny fizotry ny milina amin'ny alàlan'ny ivon-toeran'ny milina CNC.
Nisokatra soa aman-tsara ny tranokala PTJ Japoney
Amin'ity faritra maro karazana ity, ny fahafaha-manompo faritra namboarina bebe kokoa sy ny fitohizan'ny fanavaozana dia goavana, na ny fiaraha-miasa amin'ny milina CNC any Japon na ny olana lavitra any Japon. , Milaza amintsika ve fa Japon dia tsena goavana sy mety.
Ny PTJ Shop dia nandany ny audit IATF16949 nahomby
Taorian'ny fanomanana nandritra ny taona maro nataon'ny mpiasan'ny orinasa dia nandalo tamin'ny fomba mahomby ny IATF16949: 2016 (rafitra fitantanana kalitao-ny fepetra takiana manokana amin'ny ISO9001 ho an'ny famokarana sy ny serivisy mifandraika amin'ny indostrian'ny fiara) ny 10 Janoary Navoaka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny Aprily tamin'ity taona ity.
Inona no azon'ny mpangataka fanampiana atao aminao?
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay dia naharitra amam-bolana na herinandro vao namorona vokatra prototype. Na ny drafitra famolavolana antsipiriany indrindra aza dia mitaky fotoana hampiasana azy io, ary mila fotoana bebe kokoa ny fifantohana amin'ny fahazoana fitaovana sy famoronana endrika.
Fampidirana toetra PTJ: kan huang
kan huang dia nahazo diplaoma tamin'ny lanxiang, manana BS amin'ny Business Management. Niaraka tamin'ny The Flinchbaugh Company izy. Mpanara-maso ny atrikasa an'ny orinasa izy
Fampidirana toetra PTJ: Jay chen
Niasa tao amin'ny orinasa i Jay chen hatramin'ny taona 2009. Niasa tao amin'ny magazay nandritra ny 10 taona ny boky fiasa, CNC Mills ary CNC Lathes.
Fampidirana toetra PTJ: David Lan
David dia nahazo diplaoma tao amin'ny Oniversiten'i Shaoguan manana mari-pahaizana licence amin'ny Business Administration. Talohan'ny nidirany tao amin'ny orinasa PTJ tamin'ny Janoary 2012, dia izy no mpitantana ny zhilian, LLC any shenzhen, china tamin'ny 2007-2011.
Fampidirana toetra PTJ: Mpitantana ny varotra Michelle
Niasa tao amin'ny The PTJ Factory i Michelle nanomboka tamin'ny taona 2009 teo amin'ny fitantanana varotra .Matanjaka tokoa ny fahaizany miasa ary manome azy fankasitrahana tsara ny fahaizany ny mpanjifa.
Fampidirana toetra PTJ: Boss zhou hanping
Zhou hanping dia nanomboka ny asany tamin'ny famokarana tao amin'ny Foxconn Factory any shenzhen, china tamin'ny taona 2003. Nandroso tamin'ny alàlan'ny andraikitra maha milina Jeneraly Foreman, Manager, ary farany, mpitantana ny milina Foxconn CNC. Izy dia manana traikefa amin'ny milina isan-karazany sy amin'ny fizotrany manokana.